Ohatrinona ny orinasa manambola amin'ny paikady marketing amin'ny atiny? | Martech Zone
Ity infographic avy any Tamba, ny Revolisiona momba ny marketing amin'ny atiny, manana ny momba ny fanangonana statistika tsara indrindra ho an'ny orinasa B2B sy B2C ihany koa hanamarinana ny fampitomboana ny ezak'izy ireo sy ny fandaniany ny vola paikady marketing amin'ny atiny. Mahaliana tokoa, saika ny antsasaky ny serivisy fanoratana sy famolavolana dia ampitaina amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny atiny.
Aza hadino ny mamaky ny lahatsoratray lalina inona ny Marketing Marketing ary ny fomba famolavolana paikady marketing amin'ny atiny. Ary - mazava ho azy mifandraisa amin'ny masoivoho marketing amin'ny atiny raha mitady fanampiana ianao. Indrindra raha eo amin'ny indostria teknika be ianao. Mpitarika amin'ny fikarohana, fanoratana ary famolavolana lahatsoratra, infografika ary whitepapers ho an'ny indostrian'ny marketing sy teknolojia izahay.
Ohatrinona ny tetibola ara-barotra laniana amin'ny marketing amin'ny atiny?
Ny vola mediana amin'ny marketing amin'ny atiny dia $ 1.75 tapitrisa miaraka amina orinasa iray amin'ny enina orinasa mandany $ 10 tapitrisa isan-taona araky ny Content Marketing Institute. Red Bull dia mampiasa olona 135 ho an'ny tranon'ny haino aman-jery fotsiny, Nestle dia manana mpitantana sy mpamorona vondrom-piarahamonina 20 mpamokatra atiny isan'andro, Coca-Cola dia mandany vola bebe kokoa amin'ny famoronana atiny noho ny dokam-barotra amin'ny fahitalavitra ary manombana i Kraft fa mamorona doka 1.1 miliara amin'ny alàlan'ny marketing amin'ny atiny - fampiasam-bola 4x mihoatra ny dokam-barotra kendrena!
Ny mpivarotra B2B dia mandany 28% amin'ny teti-bolany amin'ny votoatiny, 55% no hampiakatra ny fandaniana
Ireo mpivarotra B2C dia mandany ny 25% amin'ny teti-bolany amin'ny votoatiny, ny 59% dia hampiakatra ny fandaniana
Tags: b2bb2cpaikadin'ny votoatin'ny orinasapaikadin'ny atin'ny mpanjifapaikady marketing amin'ny atinyafa-po paikady
Jery ​​voalohany miavaka amin'ny Rundown Content Studio
Ohatrinona ny vidin'ny infografika? (Ary Ahoana ny fomba hitsitsiana $ 1000)
Jan 12, 2016 ao amin'ny 7: 54 AM
Ny marketing amin'ny atiny no mpanamboatra mpanjaka, ny fandaniana amin'ny marketing amin'ny atiny sy ny atiny loharanon-karena tsara ao amin'ny bilaogin'ireo tranonkalanao dia tena hanampy ny tranonkalanao hahatratra sy ho pr
12 Jan 2016 amin'ny 10:53 PM
Sombiny tena tsara. Fintino tsara ny fanjakan'ny marketing amin'ny atiny. Misaotra